JINGHPAW KASA: ဂွေခါမော်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
အောက်တိုဘာလ (၅) သောကြာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ ဂွေခါမော်တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရတပ် များ ယနေ့မနက် (၆း၁၅) နာရီအချိန်တွင် ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤဂွေခါ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရတပ်ဘက်မှ (၆) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၂၀) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(6) Burmese soldiers killed and (20) wounded in Gwi Hka, Western Kachin State on October (5), according to the KIO frontline report. The huge Burmese Government troops arrived in Gwi Hka, KIA (6) Battalion, under KIA (2nd) Brigade area on 06:15 AM. Then, the KIA (6) patriotic troop opened fire and fought severely the invader Government troops as defending the territories on the early Friday morning.
Dap Ba (5) nre, Dap Ba (2) she re. Sinna hkran de Dai Dap Ba (2) dai langai sha nga ai.
October praw5hpe tsun ai she rai sam ai law.